Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iindawo eziGqwesileyo zokuHambo ngo-2022
I-Lonely Planet namhlanje iveze amazwe ayo ali-10 aphezulu, izixeko kunye nemimandla aza kuyindwendwela kulo nyaka uzayo ngokukhutshwa kweLonely Planet iNgcono kuHambo ngo-2022.
Eyona nto ingcono kuHambo ngo-2022 yingqokelela yonyaka ye-17 yeLonely Planet yezona ndawo zishushu ehlabathini kunye namava ohambo ekufuneka ubenawo kulo nyaka uzayo. Olu shicilelo lubeka ugxininiso olukhethekileyo kumava okuhamba azinzileyo - ukuqinisekisa ukuba abahambi baya kuba neempembelelo ezintle naphi na apho bakhetha ukuya khona.
IZiqithi zaseCook ezikude nezizingcayo - lelinye lawona mazwe mancinci kwihlabathi - libanga indawo ebawayo njengelizwe elinokuqala ukufunwa ngo-2022, ngelixa iNorway ibeka indawo yesibini kunye neMauritius yesithathu.
Indawo yokuqala yeLonely Planet ngo-2022 yiWestfjords, eIceland, ummandla wesiqithi welizwe ongachatshazelwanga lukhenketho olukhulu apho uluntu lusebenza kunye ukukhusela nokukhuthaza imbonakalo-mhlaba ebukekayo. IWest Virginia, eMelika iphuma kwindawo yesibini, ilandelwa yiXingshuabanna, eTshayina.
Isixeko esikwinombolo enye iAuckland, iNew Zealand yamkelwa ngokuqhakaza kwenkcubeko apho imbonakalo ikwindawo yokuyila, ngelixa iTaipei, iTaiwan ikwindawo yesibini, kunye neFreiburg, eJamani kwindawo yesithathu.
Nyaka ngamnye, uluhlu olugqwesileyo lweLonely Planet kuHambo luqala ngokutyunjwa kwabasebenzi abaninzi beLonely Planet, ababhali, iibhlogi, amaqabane apapashayo nokunye. Ulonyulo luye lwancitshiswa liphaneli yethu yeengcali zokuhamba ukuya kumazwe ali-10 kuphela, imimandla eli-10 kunye nezixeko ezili-10. Nganye ikhethelwe ubunjani bayo, amava awodwa, into ethi 'wow' kunye nokuzinikela kwayo okuqhubekayo kwiinkqubo zokhenketho ezizinzileyo.
NgokukaLonely Planet's VP yamava uTom Hall ukukhululwa "koluhlu olushushu" lweLonely Planet lonyaka lweendawo kunye namava okuhamba akunako ukubakho ngexesha elifanelekileyo. "Emva kokunyanzeliswa kwekhefu, lixesha lokuthatha ezo zicwangciso zohambo zihlehlisiwe kwishelufa kwaye uzenze zibe yinyani," utshilo uHall ekukhululweni kolu luhlu namhlanje.
“Uluhlu lubhiyozela ihlabathi ngazo zonke iintlobo zalo ezinomtsalane,” uqhubeka uHall. “Ukususela kumachibi namahlathi eZiqithi zikaCook ukuya kwiingxangxasi neentaba zeWestfjords zaseIceland, udlula kulonwabo lwendalo nedolophu yaseAuckland.”
Njengesiqhelo iLonely Planet's Best in Travel ihambisa izinto ezintsha kwiindawo ezithandwayo ezifana neNorway kunye neDublin, eIreland, kwaye ifumene amatye anqabileyo angaziwa kangako njengeShikoku, iJapan kunye ne-Australia's gorgeous Scenic Rim kunye neyona dolophu izinzileyo yaseJamani iFreiburg.
Eyona nto igqwesileyo kwiLonely Planet kuHambo ngo-2022-Indawo yokufikela eyi-10 ephambili
Amazwe aphezulu ayi-10
1. Iziqithi zaseCook
Imimandla eyi-10 ephezulu
1. IWestfjords, eIceland
5. EPuerto Rico
6. EShikoku, eJapan
7. Intlango yeAtacama, eChile
8. I-Scenic Rim, eOstreliya
9. Isiqithi saseVancouver, eKhanada
Top 10 Izixeko
1. IAuckland, eNew Zealand
2. ETaipei, eTaiwan
3. Freiburg, eJamani
6. INicosia/Lefkosia, eSipro
7. EDublin, eIreland
8. Merida, eMexico
9. EFlorence, eItali
10. IGyeongju, eMzantsi Korea
UJoanne Patrick uthi:
Oktobha 29, 2021 kwi-12: 02
مرحبا, أنا سعيد جدا الآن لأنني حصلت اليوم على مبلغ قرضي بقيمة 60.000 دولار من هذه الشركة الجيدة بعد أن حاولت عدة شركات أخرى ولكن دون جدوى هنا رأيت إعلان شركة uJoan Finance وقررت تجربته واتبعت جميع التعليمات. وهنا أنا سعيد اليوم , يمكنك أيضًا الاتصال بهم إذا كنت بحاجة إلى قرض سريع , فاتصل بهم[imeyile ikhuselwe]) okanye whatsapp: +919144909366